Ukumiselwa kusengaphambili - IZifundo ZeBhayibheli
Kungani Unkulunkulu afaka umuthi wokwazi okuhle nokubi phakathi nensimu?
Kudalwa komuntu Kanye incarnation of Christ
Umsuka uSathane, the ‘uyise wamanga’
Ngoba Unkulunkulu muhle?
"siqhubekele kokupheleleyo" Heb 6:1
Unkulunkulu kusindisa abantu zikhathi zonke, kodwa akekho kubo kungaba athathe ilungelo uvumelane image of Christ kodwa labo zazibheka Unkulunkulu: ibandla. Kuyinto umzimba Kakristu avezwe ukuba principalities namandla ezulwini ukuhlakanipha manifold Kankulunkulu, ngoba inhloso ebekwe ekwenzeni Ukristu evelele phakathi kwabazalwane abaningi onjengaye kwembulwa esontweni (Efe 3:10 -11).
“Ngakho-ke, uma umuntu Ekukristu uyisidalwa esisha; izinto kudlulile; bheka, zonke izinto zaba zintsha” (2 Korinte 5:17)
Isenzo Lesigreki elihunyushwe ngokuthi “kusengaphambili” kuba προορίζω (proorizo), futhi lisho “ukuba athathe isinqumo ngaphambi”, “kucala Mark”, “kusengaphambili”.
The term ukhonza ukhombe isimo ephephile eyasungulwa Unkulunkulu ingunaphakade. Bonke abakholwa Kristu iqiniso ivangeli bazalwa ngokusha ngokusebenzisa imbewu ongonakali (1 Pet 1:23), futhi uma embathe elingukungaboli, njengoba kuyoba isithombe express of the kuKristu okhazinyulisiwe “Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kodwa aliveli lokho esiyoba yikho. Kodwa siyazi ukuthi lapho ibonakala siyoba njengaye kuye; ngoba siyombona njengoba yena “(1 Johane 3: 2).
Indoda kuza ezweni ngentando intando yenyama womuntu igazi beletha ngokwakhe ngomfanekiso Adamu, umuntu yasemhlabeni (Johane 1:12; 1 Kor 15:48), futhi kuphela uma they kholwa Kristu elakhiwe new Ngakho uNkulunkulu ngokuvumelana levangeli, izidalwa ezintsha, futhi uma uya alufane on elingukungaboli, zonke izidalwa ezintsha ngomfanekiso umuntu ongokomoya, onguKristu, u-Adamu wokugcina (1 Korinte 15:48 -49).
Leligama lisetshenziswa kusengaphambili Etestamenteni Elisha ukuba ubheke endaweni ukuthi uhlukile amadoda angokomoya. amakristu kunqunywa uNkulunkulu okufanele zilandelwe ukuze kakhulu umfanekiso kaKristu.
unkulunkulu ayesenze ngaphambili ukuthi uKristu ayeyoba izibulo phakathi isikhundla eziningi bazalwane, isimo odumileyo ukuthi Ezelwe Yodwa, ukwaba labo bayingxenye yomzimba kaKristu lenhloso “Kulabo ayesazi naye kusengaphambili ukuba uvumelane image of iNdodana yakhe, ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi “(Roma 8:29).
Le ndoda Ukristu waba yedwa Unkulunkulu wazisa ezweni ngaso sonke njengabantu ukuba nesihe High Priest (Hebheru 2:17) kanti angaqashwa sife for everyone (Heb 2:14).
Ukuze abulawe Kanye resurge, Ujesu wakhazinyuliswa izibulo kwabafileyo isikhundla, futhi wathatha eyizibulo isikhundla phakathi kwabazalwane abaningi, ngoba kwaholela inkazimulo Kankulunkulu kwabazalwane abaningi (Heb 2:10).
kukristu okhazinyulisiwe ingumfanekiso kaNkulunkulu eshiwo (Heb 1: 3; Kol 1:15), futhi ngofuzo igama elikhulu eliphezu kwamagama onke igama (Filipi 2: 9), futhi Yena inhloko yomzimba, ie, ibandla , ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke (Efe 1:23). Amakristu ajikele resurfaced Nokristu futhi omzimba wakhe, okuyinto ibandla (Kol 3: 1).
Akuyona nokho esicacile kanjani bayosindiswa (1 Johane 3: 2), kodwa siyazi ukuthi sonke uyakusindiswa njengoba umfanekiso kuKristu okhazinyulisiwe, ukuze lokhu inkazimulo ukuthi uyokwambulwa in the Christian yindalo yokububula sengathi in pain kwezidingo ngenxa nokulindela abalindele okubonakalisa amadodana kaNkulunkulu (Roma 8:19 -21)
Uma bagqoka ukungafi nokungonakali (Roma 8:23), okungukuthi, uma uya ukukhululwa komzimba ekuHlwithweni of the Church, usindiswe kuKristu kuyofinyelela isimo esashiwo uNkulunkulu esilapho kuGenesise: – “Masenze umuntu ngomfanekiso wethu, emva wafana yethu “(Gen. 1:26), ngoba bonke kanye ozelwe uNkulunkulu ngokuvumelana neqiniso ivangeli uyofana kuKristu okhazinyulisiwe, futhi yena, umfanekiso express kaNkulunkulu ongabonakali (Kolose 1 : 19).
Inhloso Unkulunkulu waphakade, nenjongo yakho ngokuba ukuphumula phakade uqobo, hhayi izidalwa zakhe, adalwa Ngakho-ke, akuzona okuphakade ‘kwaziwe kithi imfihlakalo intando yakhe Kuvumelana nentando yakhe quepropusera omuhle ngokwako… “(Efe 1: 9).
Futhi yini kwaba le njongo osungulwe ‘Himself’? Yenza Indodana Ezelwe amazibulo kuphela phakathi kwabazalwane abaningi like Him ukuze kukho konke angase abe ngowokuqala “Ngokusho engunaphakade esesikhundleni Kukristu Jesu Inkosi yethu” (Efe 3:11); “Kulabo ayesazi naye kusengaphambili ukuba uvumelane nomfanekiso + weNdodana yakhe, ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi” (Roma 8:29;kol 1:18).
Nakuba izingane eziningi ziye ezazithathwe Ukristu inkazimulo afeze engunaphakade (Hebheru 2:10), intonga injongo kaNkulunkulu uKristu, okuwukuthi, injongo yaKhe yasungulwa ngo Himself (Efe 1: 9 ).
In Indodana inyama umzimba Unkulunkulu uye wabutha zonke izinto (Col 1:20 -22), kanye noNkulunkulu kakhulu wamphakamisela (Fil 2: 9), izinto zonke izinyawo zakhe futhi, ngaphezu kwakho konke izinto (Kol 1: 23), naye ngokomthetho inhloko yesonto, yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi (Efe 1:22).
Kuyadingeka ukuba baqonde lokho elingakanani inkazimulo ibandla njengoba umzimba Kakristu, kusukela Ukristu wafakwa ngaphezu kwakho konke ubukhulu, domain, igunya, amandla, njll, futhi ngaphezu kwakho konke, senziwa inhloko yesonto, ngakho isonto kuyoba ngaphezu kwakho konke ubukhulu, amandla okubusa, igunya, amandla, njll “Njengoba ovuthayo amehlo kwengqondo yakho, ukuthi nina nazi ukuthi liyini ithemba ukubizwa kwakhe, futhi yini ingcebo yefa lakhe kubo abangcwele, futhi uyini obumangalisayo bamandla akhe kithina-ward abakholelwa, ngokokusebenza kwamandla akhe anamandla, azenzayo Kukristu, lapho wamvusa kwabafileyo, futhi wammisa ngakwesokunene sakhe ezulwini bonke ubukhulu, namandla, futhi lamandla, nokubusa, futhi wonke igama ukuthi aqanjiwe, kungekhona kulesi yobudala kodwa in the next; futhi zonke izinto ngaphansi kwezinyawo zakhe, futhi kuzo zonke izinto yinhloko yesonto, eliwumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke “(Efe 1: 18-23).
In iphakade, izwe lingakabikho, Unkulunkulu wamisa ukuthi izwi lakhe kufanele iyophakanyiswa ngaphezu zonke izinto (IHU 138: 2), futhi Ukristu ubelokhu waphakanyiselwa, ngoba ukuba bangena enkazimulweni yayo waba eliphezulu kakhulu futhi sublime (Is 52: 14).
Ukuze enze Ukristu izibulo itawufuneka ukukhiqiza kwabazalwane abaningi. Ukuze wenze it inhloko, umzimba, ibandla itawufuneka.
Kwakungesikhathi Ngenxa inhloso eqalwe Kukristu ukuthi Unkulunkulu usindisa inzalo ka-Adamu ukushumayela ivangeli, labo abakholelwa anikwa amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu (Johane 1:12).
The lost in isono kumenyezelwa insindiso egameni Likakristu, njengoba Labo abadla inyama niphuze igazi Likakristu baba abahlanganyeli Bakakristu, okungukuthi, zenziwa omzimba Kakristu.
Labo agcinwa ngevangeli babizwa ngobizo olungcwele, okuwukuthi, ngokusho inhloso osungulwe Kukristu umhlaba ungakabikho “Ngubani wasisindisa, futhi wasibiza ngobizo olungcwele, hhayi ngokusho imisebenzi yethu, kodwa ngokusho Injongo yakhe siqu nomusa, esawuphiwa Kukristu Jesu zingakabikho izwe kwaqala “(2 Thim 1: 9).
Ngokuba Nokristu, okungukuthi, isidalwa esisha, Umkristu kusengaphambili ukuba uvumelane image of Christ, okuyinto imiphumela inhloso Kankulunkulu Kukristu, ukuze alenze yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi, ikhanda sublime kakhulu umzimba.
The okuwumsebenzi Kukristu lamiswa ngo engunaphakade esekelwe inhloso esungulwe Kukristu, ukuze isipho somusa isidalwa esisha sika kube iqhaza Le njongo ngokuba abantwana noma amalungu umzimba ngomusa ukuthi akusho ukulandela imisebenzi yethu.
Umphostoli Upawulu ubonisa ukuthi umzimba Kakristu utshala futhi lowo okuphumula akukho mehluko, nakuba ngamunye umvuzo wakhe ngokomshikashika wakhe “Manje lowo otshalayo nalowo oniselayo bamunye ngubani futhi wonke umuntu uyakwamukeliswa umvuzo wabo ngokomsebenzi wakhe “(1 Korinte 3: 8).
Lokhu kusho ukuthi wonke Umkristu uyovuzwa ngokuvumelana okuhle nokubi eye wenza emzimbeni (1 Kor 9:17; 1 Kor 3:13 -14 2 Korinte 5:10; Kol 3:24), kodwa grace ukuba babalwa eseyingane kaNkulunkulu ukuba abe kuKristu uJesu ngomusa, esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho izwe kwaqala ngenxa yokuba uNkulunkulu kuKristu.
The okuwumsebenzi ngokuvumelana nenjongo Kankulunkulu omisiwe Ngokristu umhlaba ungakabikho kuba mklomelo sinikezwa kuphela abasenkonzweni Kukristu, okuwukuthi, izidalwa elisha laba undab aphinde ngokusho izwi leqiniso “press sengqondo uphawu for the umklomelo nokubiza Kukankulunkulu Kukristu Jesu ‘(Fil 3:14).
Ungakwazi ungayididanisi call ivangeli okuwumsebenzi ngokusho engunaphakade, ngoba okuwumsebenzi ngokuvumelana nenjongo okuphakade iqembu elithile labantu (bonke abakholwa Kukrestu), kanti call of the ivangeli jikelele (amaningi) futhi ezihlosiwe ngaso sonke ngenxa yokungalaleli kuka-Adamu, kodwa walilahla lelo ukuhlangabezana call zimbalwa (Mt 7:14), yingakho lokobana bambalwa in the isimo ekhethiwe “ngoba baningi ngokuthi, kodwa bambalwa abakhethiwe” (Mt 22:14).
Mayelana call jikelele ivangeli umphostoli Upawulu uthi: “Ngokuba ngaye sesithole umusa nobuphostoli, ngoba aobediência ukholo phakathi kwazo zonke izizwe ngamagama, phakathi kwabo kukhona nani the ngokuthi Ujesu Kristu ‘(Rom 1: 5).
The esidingweni sokulalela izwi ukholo liyashunyayelwa zonke izizwe (izenzo 15:14 -17), nakuzo zonke izizwe amaKristu ngokuthi ukuba ne kuJesu Kristu. Emva bezwa umyalezo ivangeli lokusindiswa futhi bakholwa Kukristu, Amakristu aqala ‘nokuba Kukristu’, okungukuthi, izidalwa ezintsha benziwa “In ngaye nani omethembayo, ngemva kokuba senizwe izwi leqiniso, ivangeli lakho insindiso; futhi, enakholwa nguye futhi bakholwa, nabekwa uphawu Ngomoya Ongcwele ka kwesithembiso “(Efe 1:13).
Insindiso Kukristu isimemo bonke abantu kuzo zonke izizwe futhi ngesikhathi ibizwa ngokuthi namuhla “Bheka kimi nisindiswe, yonke imikhawulo yomhlaba; ngokuba nginguJehova uNkulunkulu, futhi akukho ezinye “(Ingabe 45:22),” Thambekisa indlebe yakho, nize kimi, nizwe, uyakuphila umphefumulo wenu uyakuphila, ngoba nawe ngizokwenza isivumelwano esiphakade, ngobubele ngokuqinile kaDavide akunika “(Ingabe 55: 3) ; “(Ngoba kanje, ngikuzwile in an isikhathi esamukelekayo futhi ngasiza ngosuku lwensindiso, Bheka, manje kuyisikhathi esihle kakhulu; bheka, manje kulusuku lwensindiso) ‘(2 Korinte 6: 2).
Ingabe okuwumsebenzi ngokusho engunaphakade senzeka engunaphakade, izwe lingakabikho (2 Tim 1: 9). In iphakade yasungulwa Ukristu evelele phakathi kwabazalwane abaningi, ngaphezu zonke izinto inhloko Yesonto “Futhi iyinhloko yomzimba, ibandla: ngubani isiqalo izibulo kwabafileyo, ukuthi konke angase abe ngowokuqala” (Kol 1:18).
Ukuze afeze injongo yakhe, Unkulunkulu wadala u-Adamu, umuntu wokuqala emva image of ngaye ukuthi kwakuzokwenzeka, umuntu Ukristu Jesu (Roma 5:14).
Usathane yena, waqaphela ukuthi Unkulunkulu uzonika umuntu isikhundla isingaphezu kwezingelosi, isikhundla like the Ophezukonke, kwaletha ifinyelela kube sesimweni ngaphezu kwezinye izingelosi (Isaya 14:14).
Isimo Usathane ngokuyifisa, Ujesu Kristu kuvuka kwabafileyo ukufinyelela, ngoba kwahlangabezana efana Almighty, umfanekiso Kankulunkulu eshiwo (IHU 17:15).
Bonke abakholelwa Kukristu, afe, bangcwatshwe futhi ibuye Nokristu isidalwa esisha esimweni sovuko lwakhe (Roma 6: 5), futhi ngaphandle ukuphela ukuthi ngeke ngokomfanekiso Walowo express of Christ ukuze ibe yizibulo phakathi abafowethu abaningi futhi, ngaphezu kwakho konke izinto inhloko yesonto.
Wonke Amakristu kakade okhazinyulisiwe (Johane 7:22; Roma 8:17; Rom 6: 4 -5), njengoba kakade navuswa kanye noKristu (Kol 3: 1) futhi ehlezi noKristu ezindaweni zasezulwini (Efesu 1: 3; Efesu 2: 6; Heb 4: 3).
Ngenkathi pilgrimage lo okholwayo isikhathi, bonke yabangela ukuba ahlale kulo umusa sikhula olwazini yevangeli, ukuze ngokubekezela ulwazi oza esilinganisweni sobukhulu sokugcwala Kukakristu – Perfect Man – nakuba konke Kukristu lamandla ifa labangcwele ukukhanya “kuze sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini Indodana Kankulunkulu, kuze umuntu ophelele, kuze kube esilinganisweni sobukhulu sokugcwala Kukakristu” (Efe 4:13; Kol 1:12).
Kuyinto ukukhululwa komzimba ukuthi okholwayo uzovumelana nomfanekiso Kakristu ovukileyo. Uzasebenzisa kuphela lapho okufayo kumelwe kugqoke ukungafi futhi yini onakaliswe ngiyobe bagqoka ukungafi, kuzokwenzekani ne ayobe wesonto (Roma 8:23).
Igama Lesigreki elihunyushwe ngokuthi “kusengaphambili” isetshenziswa umphostoli Upawulu Kwabaseroma mayelana ngomfanekiso Kakristu, Engukristu yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi (Roma 8:29).
Encwadini eya kwabase-Efesu, umphostoli Upawulu usebenzisa igama elithi efanayo ukukhumbuza Amakristu ukuthi babusiswa izibusiso ezingokomoya Kukristu, okuwukuthi, ngoba kukhona izidalwa ezintsha.
Enye yalezi zibusiso the ‘yokunqunyelwa’ Yamakristu ngoba kukhona Kukristu, okubenza babe abantwana Bakankulunkulu by ukutholwa (Efe 1: 4). Ngenxa yokuthi izidalwa ezintsha, Amakristu benziwa ifa, ngoba isimo efana Indodana Kankulunkulu abanqunyelwe kusengaphambili imiphumela in kutuswe inkazimulo Kankulunkulu (Efe 1:11 -12).
The okuwumsebenzi isekelwe amalungu emzimbeni Kakristu ukuba uvumelane image of Christ Ungumbusi futhi esasiwujuqu ngoba ingunaphakade Unkulunkulu asibeka phambi konke, ukuthi Ukristu pre-abadumile, inhloko yomzimba, konke ababe olwenziwe intando inkazimulo Ngokristu kuyofana Kuye.
unkulunkulu kusindisa abantu zikhathi zonke, kodwa akekho baye kusengaphambili ukuba uvumelane image of Christ kodwa labo zazibheka uNkulunkulu: ibandla. Kuyinto umzimba Kakristu avezwe ukuba principalities namandla ezulwini ukuhlakanipha manifold Kankulunkulu, ngoba inhloso ebekwe ekwenzeni Ukristu evelele phakathi kwabazalwane abaningi onjengaye kwembulwa esontweni (Efe 3:10 -11).
Ngesikhathi naphakade sovereignly futhi irrevocably Unkulunkulu kunqunywa labo ngesikhathi lapho ebizwa namuhla ukuba amukele insindiso ukuthi Ukristu unikeza ukuba njengoba image express of the kuKristu okhazinyulisiwe ngesikhathi samanje, okuthiwa namuhla, ngokusebenzisa amanxusa abo, okuyinto ibandla, uNkulunkulu ubiza abalahlekile ukuthi Buyisanani noNkulunkulu (2 Korinte 5 “Manje ke thina singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu for us wancenga Manje siyaniyala, Ngakho-ke, ngokuba uKristu, niguqulwe Buyisanani noNkulunkulu.”: 20); “(Ngoba kanje, ngikuzwile in an isikhathi esamukelekayo futhi ngasiza ngosuku lwensindiso, Bheka, manje kuyisikhathi esihle kakhulu; bheka, manje kulusuku lwensindiso) ‘(2 Korinte 6: 2).
Labo siphikelele Kristu kusengaphambili ukuba uvumelane umfanekiso Kukristu okhazinyulisiwe ‘Uma, eqinisweni, nisekeliwe baqine okholweni, futhi ningagudluzwa kude ethembeni levangeli enalizwa, ezashunyayelwa kukho konke okudaliweyo engaphansi livela ezulwini, engiye mina Pawulu isikhonzi “(Kol 1:23).
Nakuba labo abangamalungu ‘Kukristu’ (indalo entsha) kuyoba njengoba Indodana ngomfanekiso Kankulunkulu ovusiwe, ukuba ‘Kukristu’ kuyadingeka ukuze kuzuzwe insindiso lost ngokulalela Ukristu namuhla “Futhi eseqedile, waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo “(Heb 5: 9).
Nakuba babusiswa uvumelane image kukaKristu ayinakushintshwa labo kuKristu, umusa sensindiso ukulalela ivangeli kungagwenywa “Ye akazange ukugijima kahle; abenza kukuphazamise ukuthi nina akufanele ukulalela iqiniso?” (Gal 5: 7).
Ngokungafani prolate umqondo by Bakacalvin and arminianistas, Ibhayibheli libonisa ukuthi akekho kuza ezweni kusengaphambili insindiso, ngokuba bonke akhulelwa esonweni (ihubo 51: 5), futhi kumele balalele uhlobo imfundiso wamemezela Ukristu nabaphostoli “Kodwa ngiyabonga Unkulunkulu wena ayeyizigqila zesono, wena ngenhliziyo balalela hlobo lwemfundiso wena uzokhululwa “(Roma 6:17; Rom 10: 8).
Kuphela ngemva kokuba senizwe izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa, futhi kholwa Kujesu Kristu umuntu asindiswe “Who nani omethembayo, ngemva kokuba senizwe izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu; futhi, enakholwa nguye futhi bakholwa, nabekwa uphawu Ngomoya Ongcwele ka kwesithembiso “(Efe 1:13); “Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa” (KwabaseRoma 10: 9).
Akekho umuntu ozalwa emva inyama kusengaphambili insindiso, kodwa kuyadingeka bezwe isigijimi sensindiso futhi bekholwa kuKristu njengoba kusho umBhalo, izinqumo uKristu ngesikhathi esamukelekayo: namhlanje, njalo bekholelwa “Okholwayo abhapathizwe kuyakuba usindiswe kepha ongakholwayo uyakulahlwa “(Marku 16:16; Heb 3: 6 no 14).
Wazimisa labo abathanda Unkulunkulu, okungukuthi, labo abalalela ivangeli, kulabo kuphela abagcina imiyalo kaNkulunkulu iwukuba ukukholelwa kuKristu babizwa ukuba njengoba image express kaKristu, ngenhloso yale okuwumsebenzi wukuthi kuphela Kristu yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi onjengaye “Futhi siyazi ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kubo ukuthi ukuthanda uNkulunkulu, kubo ababiziweyo ngecebo lakhe” (Roma 8:28); “Lowo ocucuzayo imiyalo yami, futhi engagcini kubo, yena it is nothanda kimi: futhi lowo othanda mina oyokwenqatshelwa ngithandwa uBaba wami, futhi nami ngiyomthanda nokubonisa mina kuye” (Johane 14:21; 1 Johane 3:23) .
Yilabo ngaphambilini babe munye Nokristu (owaziwa) ngevangeli labo kunqunywa ukuba uvumelane image of Christ “Kulabo ayesazi naye kusengaphambili ukuba uvumelane nomfanekiso + Wendodana yakhe, ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi “(Roma 8:29); “UNkulunkulu uthembekile, okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni neNdodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu” (1 Kor 1: 9).
Isenzo Lesigreki elihunyushwe ‘bazi’ alisho ‘ukwazi mayelana’, ngaphambi kokukhuluma yenhlanganyelo obuseduze, ukuba umzimba munye noKristu “Ngakho thina, ngubani ziningi, angumzimba owodwa omunye noKristu, futhi ngamunye singamalungu omunye omunye “(Roma 12: 5); “Futhi lowo ogcina imiyalo yakhe kuye, futhi yena kuye. Futhi ngalokhu siyazi ukuthi uhlala kithi, ngoMoya ngalo usiphile” (1 Johane 3:24).
The call to yenhlanganyelo ikhuthaza Indodana insindiso ngesikhathi ibizwa ngokuthi namuhla, kusukela ndazo ukuba nifane ngomfanekiso Krestu wathatha indawo engunaphakade ngokuvumelana nenjongo ukuthi Unkulunkulu unalo ngokwakhe, ukwenza Ukristu okhazimulayo Kanye sublime kakhulu phakathi kwabaningi bazalwane onjengaye.
← Isizukulwane Chosen
The grace amazing →
Copyright © 2019 IZifundo ZeBhayibheli . All rights reserved.